लसुन र प्याजको फेसप्याकबाट यसरी बनाउनुस् सुन्दर मुहार (विधिसहित)::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
लसुन र प्याजको फेसप्याकबाट यसरी बनाउनुस् सुन्दर मुहार (विधिसहित)
सफा, मुलायम, चम्किलो अनुहार कसरी बनाउने ? यसका अनेकौ काइदा छन् । घरेलु विधिबाट पनि अनुहारलाई चम्किलो र मुलायम बनाउन सकिन्छ । धेरैले अनुहारको सौन्दर्यका लागि बेसन, गुलाब जल, घिउकुमारी, बेसार, दूध, मह जस्ता घरेलु वस्तु उपयोग गर्ने गरेका छन् । यद्यपि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, प्याज र लसुनको प्रयोगबाट पनि अनुहार चम्किलो बनाउन सकिन्छ ।
प्याज स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवैको लागि लाभदायक मानिन्छ । तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो खानामा काँचो प्याज पनि सामेल गर्नुहोस् । यसलाई पिसेर फेसप्याक बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ ।रुखोपन हटाउने लसुन